+/- How do we make blog?
ကိုမျက်လုံး ရဲ့ ဘလော့ဂါဒေါ့ကွန်းတွင် ဘလော့တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း
Download စေတန်ဂေါ့ဒ် ရဲ့ Making Blog
ညီလင်းဆက် ရဲ့ Making Myanmar Blog
မသဉ္ဇာစုစည်းထားတဲ့ Blog အတွက်လိုတာလေးတွေ
ကိုရန်အောင် ရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့...
+/- Myanmar Blog Directory
+/- My Suboo
Posted by tuzzaung at 3:11 AM 12 comments
၀ါသနာပါသူများ အတွက်တော့ အပျင်းလည်းပြေ၊ စိတ်ဝင်စားစရာ လည်းကောင်းတဲ့ လက်မှုအနုပညာတစ်ရပ်ပါ။ စတုန်းရန်းပုံ စာရွက်တစ်ရွက်ဟာ ဖန်တီးသူရဲ့ လက်ထဲမှာ ကြိုးကြာတစ်ကောင် ဖြစ်နိုင်သလို၊ ပန်းတစ်ပွင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားစိတ်ဝင်စားစရာ အရုပ်မျိုးစုံလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်တည်း ပျင်းနေတဲ့အခါမှာဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ရာက စောင့်ဆိုင်းရတဲ့ အခါမျိုးမှာဖြစ်စေ လက်ထဲမှာ စက္ကူတစ်ရွက်သာ ရှိနေခဲ့ရင် အရုပ်ကလေးတစ်ရုပ် ဖန်တီးခြင်းဖြင့် အဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ လူသိများ၊ထင်ရှားတဲ့ အိုရီဂါမီကြိုးကြာ လေးပါ။
ဒီကြိုးကြာလေးနဲ့က ကလေးဘ၀ကတည်းက ရင်းနှီးခဲ့တာပါ။ သကြားလုံးထုပ်တဲ့ စက္ကူလေးတွေ၊ မုန့်ထုပ်ထဲမှာပါတဲ့ တံဆိပ်ကလေးတွေကနေ ကြိုးကြာလေးတွေ အများကြီးဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကဲ..စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီလိုကြိုးကြာလေး တစ်ကောင်ကို ကိုယ်တိုင်ဖန်းတီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
စတုရန်းပုံ အခြေခံခေါက်နည်းပါ။ အရုပ်အများစုဟာ ဒီခေါက်နည်းပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။
သရုပ်ပြ video လေးပါ။
Click on the crane to see animated diagrams.
Posted by tuzzaung at 12:01 PM9comments
၄၊ ဒီဇင်ဘာ အမှတ်တရ
Posted by tuzzaung at 4:54 PM 11 comments
ဒီနေ့တော့အလည်သွားရင်းဖတ်ခဲ့ရတဲ့ linoo2007 ရဲ့ကဗျာလေးနဲ့
အနာဂတ်တွေခဏ ခဏ ခုတ်လှဲခံခဲ့ရပေါ့။
ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး မော့သောက်ရဲသူပါ မေမေ ။
အခုတော့ ကံကြမ္မာကလပ်နဲ့ ခြေစမ်းပွဲမှာ
Posted by tuzzaung at 6:31 PM0comments
Myanma Ancient Cultural Heritage Zone, Bagan, has over 2,000 religious edifices, mostly pagodas, stupas and temples. Out of those, the ... all » Ananda Temple, built by King Kyansittha in the 11th Century AD, is the most famous for its artistic and stylistic architectural designs.
The foundation plan of the Ananda is in the form of Perfect Greek Cross, which is in much contrast to others in Bagan.The4special chambers for the use of the Buddha are alsoasingnificant point of the strange foundation plan. In each of the chambers, one standing Buddha image, which is huge and is of carved with wood isadisplay of exquisite art. It is appreciable that in Bagan era, such huge wood logs were carried and carved to be kept in vertical position. Each Buddha image is 31 ft high and its pedestal is 8 ft high. The diameter of the head of the image is5ft. So, these images are the longest among other standing Buddha images in Bagan.
By standing at the very first entrance to the prayer hall, you can pay homage to the whole Buddha image without raising your head.
Especially, the standing Buddha image straight to the north archway seems to have stable face when you are near. The face gradually changes and seems to smile when you go backwards one step after another from the image. This proves how intelligent those people of Bagan era were and smart in the art of carving. Systematic management for lighting at the Ananda is so impressive that visitors have to have high appreciation for the standard of architecture of the time.
There isaspace, which can give direct natural light to each face of the standing Buddha image. Although the images are in the innermost part of the temple, pilgrims and visitors can clearly pay homage to the image because of such idealistic lighting spaces. It seems to be managed for the pilgrims to show strong devotion and concentration while they pay homage to the Buddha
There are two inner corridors at the Ananda while you go around the temple, you may surely remark on the fact that Bagan people have excellent thoughts for lighting and creation of proper ventilation.
Because natural light can enter not only through two tiers of windows around the Ananda but also passages between two corridors.
Tags: Myanmar, Temples, Ananda
Posted by tuzzaung at 12:21 AM 1 comments
ကိုယ်တိုင်မရေးတတ်လို့ ဖတ်ဖူးတဲ့ကဗျာလေးတွေ မှတ်မိသလောက်
အဲ့ဒီတုန်းက အဓိပ္ပာယ်တောင်သေချာမစဉ်းစားပဲ ကျက်ခဲ့ပေမယ့်
ဘ၀ဆိုတဲ့ကျောင်းမှာတော့ ဒီကဗျာဟာ စကားပြေပြန်စရာမလိုအောင်
တစ်လှိုင်းထွက် တစ်လှိုင်းဝင်၊ ဗေဒါခင်ဖြစ်နဲ
မုန်တိုင်းလေ ရေတစ်ရိုးမှာ၊ စိုးရွံ့မှာပဲ။
မိုးသက်လေ ရေတစ်ရိုးမှာ၊ စိုးရွံ့မှာပဲ။
ပြန်ပြန်ရွတ်မိလို့ မှတ်မိနေတဲ့ကဗျာပါ။ဒါပေမယ့် ``ဓါးမဖြစ်ခင် ငါတော့ပြာဖြစ်ရချည်ရဲ့ ´´လို့တွေးခဲ့ဖူးတာလည်းအခါခါပါပဲလေ...။
Posted by tuzzaung at 4:15 PM6comments
မရေးတတ်သူ idea ရှားလေတော့
ခက်ပါပေ့ ပီကေ ရယ်။
ထက်မြက်တဲ့ နည်းပညာ တွေ
မျှဝေ တဲ့ ဆရာ က၀ိတို့ကိုလည်း
ချစ်မယ်နော် ရဲ့ ဂွီဂေါ် လို
နှစ်သက်ဖွယ် ကဗျာလမ်း တစ်လျှောက်
ဘလော့ဂ်မိတဲ့ ကိုငတေ လို
ဇီးကွက် ရဲ့ ဘလော့ဂ်သတင်းမှာ
သီချင်းကြိုက်တဲ့ dilo အတွက်
ငယ်ကတည်းက ဇ မသေးတဲ့
နှစ်ပါးသွားလေးကချင်တဲ့ နှင်းဆီ လို
ခုတလော ပေါပေါနေတဲ့ ကောင်မလေး လို
နဘန်သာကျင်းချင်တော့တယ် မျှားပြာ ရယ်။
ဆရာရန် က တော့ခွေးချင်းကိုက်တာတောင်
Posted by tuzzaung at 7:42 PM9comments
Labels: Myanmar Bloggers
ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
Welcome to Myanmarfamily
Get Zawgyi Zawgyi Font ရယူရန်
Keyboard Install လုပ်ရန်
Myanmar Bloggers (3)
Myanmar Culture (4)
Myanmar Foods (3)
Myanmar News (4)
» Dr Zero’s Pages
» မြန်မာ open library
» မြန်မာ e-library
» မြန်မာ risp
» Unisonity's Library
» Language References
» 3m Tunes
Korean Actors & Actress
Myanmar Actors & Actress
» Auto CAD Blog
» Engineering Ebooks
» English for Success
» မြန်မာ Photoshop